musha nyika dzakabatana WWE Superstars Utatu Fatu- Naomi Mwana Wenyaya Nhoroondo Untold Biography Facts
CB inopa Nyaya Yakazara yemukadzi WWE Star ane zita rekuti "Kupenya" & mazita chaiwo; Utatu Fatu.
Yedu Naome Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Hongu, munhu wose anoziva iye ndeimwe yevakadzi vanoyemura zvikuru vakadzi vemauto muWWE. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Utatu Fatu's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Utatu Fatu- Naomi Nyaya Yehucheche - Hupenyu hwepakutanga:
Naomi (akanyaradzwa Utatu McCray) akaberekwa musi we 30th waNovember 1987 kuSanford muFlorida, United States. Akazvarwa kuna amai vake Grace uye kuna baba vake McCray.
Vabereki vaNaomi McCray naGrace.
Nyika yeAmerica yerudzi rwevatema nemidzi yeAfro-America yakamutswa nevabereki vake muFlorida kwaakakurira munzvimbo dzakapoteredza Orlando.
Kukura munzvimbo dziri pedyo nemukoma wake, Naomi mudiki aive nehunhu hunofadza hwaizivikanwa nekushanya kuWet 'N Wild theme park kuOrlando.
Naomi akakurira semwana anofara.
Mukuwedzera, Naomi aida kutamba, basa raakazoita nekushingaira kubva munguva ye8 uye rakatsigirwa nokutora zvidzidzo mumatepe, jazz, ballet, lyrical, mazuva ano uye hip-hop.
Utatu Fatu- Naome Dzidzo:
Nhoroondo yekuchikoro yaNaomi inosanganisira zvidzidzo zvake kuOviedo High School muOviedo, Florida. Ndichiri pachikoro, Naomi nechido akasanganisa vadzidzi pamwe nepamusoro-notch kutora chikamu mumakwikwi ekutamba.
Nekudaro, panguva yepamusoro pechikoro chake chesekondari, Naome aive atounganidza menduru dzakawanda dzaakakunda kubva mukutora mukana mumakwikwi ehurumende nenyika.
Iko kusimudzira kwakamushingisa ku Audition yeNBA Orlando Magic iyo yakamupa rake rekutanga chairo basa semutambi uye cheerleader.
Akabata basa iri pakati pa2007-2009 uye zvakare nyeredzi semutambi wepamberi weRapper Rida mukati menguva iyi.
Naome akapinda mumakwikwi ekutamba panguva uye mushure memazuva ake ekusekondari.
Naome anga achiri neNBA Orlando Magic apo WWE show uye iyo WWE Divas yakauya kuOrlando mu2009.
Iye-ane makore makumi maviri nemaviri-asati amboona live wrestling akasarudza kuenda kunoratidzwa uye akabva adanana newrestling.
"Ndaingoziva kuti yaiva chimwe chinhu chandaida kuva chikamu che" akati. "Ndakaona mishonga yese yevasikana uye ndaifara zvikuru ndichiona kuti ndangotanga kuzvifananidza ndiri mukati maro. Kubva ipapo ndakawana tryout uye ndave ndiripo kubva ipapo. "
Utatu Fatu- Naome Biography - Yekutanga Basa Roupenyu:
Kusiyana nevashandi vezvigadzirwa zvepamusoro, Naomi haana kumbobvumirwa kurwisana nekutengeswa vasati vasangana neWWE. Izvi zvakakonzerwa neicho chaakanga asayinirwa kuWWE munaAugust 2009 mushure mekunge aine tryout neveidzo yegore.
Pakusaina kondirakiti, Naome akapiwa zita reringi "Naomi" uye akaendeswa kunharaunda yaimbove yeWWE yekuvandudza - Florida Championship Wrestling (FCW).
Yakanga iri munharaunda iyo Naome yakatanga mumutambo wakavhenganiswa-wechikwata wakaona mumwe wake Alex Riley kusangana naAJ Lee naBrett DiBiase mukurasikirwa.
Kutanga nguva Naomi kutsika tsoka kumhete muFCW munaAugust 30th, 2009.
Kuenderera mberi nekuedza kwekugadzirisa kwekutanga kwakaona Naomi akakunda Serena Deeb kuti ave muvambo we FCW Divas Champion munaJune 20, 2010. Vakapindawo mumakwikwi evakadzi vechitatu ekukwikwidza kweNXT uye akapedza mu2nd nzvimbo.
Utatu Fatu Naomi Biography - Mugwagwa Kune Mukurumbira Nhau:
Achienderera mberi kusvika kumatunhu akakwirira, Naome akamugadzira weboka rekutanga padivi naCameron semavhereti emutsimba, Brodus Clay. Ivo vaviri (Naome naValet) vakapihwa zita rekuti "Ivo Funkadactyls" panguva yekutanga uye vakazobatanidzwa mukukakavadzana kwechikwata neBella Twins.
Cameron naNaomi Vakaburitswa Iwo maFunkadactyls akapinda muchikwata chekukakavadzana nemaBella Mapatya pakati pemamwe mateki echikwata.
Pamusoro wehukama hwavo, Iwo maFunkadactyls akabatanidzwa neClay, uye Tensai kuumba "Matani eFunk".
Iyi fomati nyowani yakatarisana neTeam Rhode Scholars (Cody Rhodes naDamien Sandow) uye maBella Twins mune vanhu vasere-vakavhenganiswa tag timu mutambo. Toni dzeFunk dzakakunda dzakabuda dzakunda mumutambo uye dzakabviswa mwedzi yakati gare gare.
Utatu Fatu- Naome Biography - Kubudirira Nhau:
Naome akaramba asingazivikanwe uye aibatanidzwa mune dzakawanda singles pakati pe2014-2016. Pfungwa dzebasa rake panguva iyi yaive yekubatana kwake neiyo Uso feud (muna Zvita 2014) uye kubatana naNaomi naSasha Banks kuumba Team BAD muna Nyamavhuvhu 2015.
Chikunguru 19, 2016, raive iro zuva rakanyorerwa Naomi kune iyo SmackDown brand. Akaita mazuva ake ekutanga gare gare muna Nyamavhuvhu 16 uye mushure maizvozvo, akarasikirwa nemakwikwi echikwata cheteki pamwe nematanho matanhatu ekubvisa.
Mwedzi yakati gare gare muna Kukadzi 2017, Naomi asingaregi akakundwa Alexa Bliss paKubvisa Chamber kuhwina SmackDown Yevakadzi Chikwata Chekutanga kekutanga. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Naomi akakunda Alexa Bliss kuhwina SmackDown Yevakadzi Chikwata Chekutanga kekutanga muna 2017.
Utatu Fatu- Naomi Hukama Hupenyu Hupenyu:
Naomi mukadzi akaroorwa. Tinokuunzira ruzivo nezve hupenyu hwake hwewanano kusanganisira masanganiro aakaita uye akaroora mumwe waanobata naye Jonathan Fatu (aka Jimmy Uso.)
Vakaroorana vakasangana paWWE mu2009 mushure mekusainirwa kuvaraidzo gore iro. Hazvina kutora nguva refu vasati vatanga kufambidzana uye vaizivikanwa kuve vaviri nevamwe vavanobata.
Utatu Naomi naJonathan Fatu (aka Jimmy Uso) vakatanga kufambidzana mu2009.
Jimmy akaenderera mberi kusunga knot naNaomi makore akazotevera pa16th yaNdira 2014. Nemuchato, Naomi ave nhengo yemhuri yeAnoa'i inova inozivikanwa imba yeSamoa -America yekurwa.
Nhengo dzinozivikanwa dzedzinza dzinosanganisira Kutonga kweRoma, Dombo, Rikishi, Yokozuna uye Umaga.
Naomi naJimmy Uso vakaroora pa16th yaNdira 2014.
Kunyangwe pasina mwana akazvarwa mumubatanidzwa wavo, Naomi anoshanda saamai vokurera vevana vaviri - Jayla naJaciyah Fatu - vakaberekerwa Jimmy kubva kuhukama hwekare.
Naomi Fatu nemurume Jimmy Uso pamwe nevana vake-vana, Jayla naJacia Fatu. Credits: Nimbus.
Utatu Fatu- Naomi Hupenyu Hwemhuri:
Naomi akaberekerwa mumhuri shomanana inozivikanwa. Tinokuudza mashoko echokwadi nezvemhuri yemhuri yake.
Pamusoro pababa vaNaomi:
McCray ndibaba vaNaomi. Iye ane ganda rakachenuruka uye anomira pakakwirira pakureba kana achienzaniswa nemukadzi wake nemwanasikana.
Kazhinji pikicha yaNaomi nababa vake McCray.
McCray anogovera chinoshamisa baba-mwanasikana chisungo naNaomi zvekuti aisakwanisa kubatsira kumuwana pakumuona akapfeka nguo chena pazuva remuchato wake. Pamusoro pazvose, anomuda uye haamboregi kumutsigira.
Baba vaNaomi vakanzwa pamoyo pavakamuona akapfeka nguo chena pazuva remuchato wake.
Pamusoro paamai vaNaomi:
Nyasha ndiamai vaNaomi. Nyasha aimbove akaparadzaniswa kubva kuna Naome waaive nenguva dzakakosha asati amupa kuroora.
Kunyangwe Nyasha pakutanga akashamiswa nesarudzo yaNaomi yekuve mutsimba, amai vane rudo vakatsigira mwanasikana wavo uye izvozvi vanofarira kumuona paTV.
Naome Fatu naAmai Nyasha.
Nezve hama dzaNaomi:
Naomi ane mukoma anova murume wechirume. Iko hakuna kutonga mukana wekuti angave aine dzimwe hama nehanzvadzi sezvo iye asingaratidze zvakawanda nezvemhuri yake.
Chinyanyo kuzivikanwa nezve mukoma mukuru akafanana naNaomi.
Utatu Fatu- Naome Chokwadi cheMunhu:
Naome runako runotarisika rwevatema runofara, runopupuma uye runofara. Chii chimwe? Anonyemwerera zvakanyanya uye haana basa nekutamba.
Anokurudzira wrestler haana kumbovhiyiwa kuti awedzere kutaridzika kwake, uye haana kana matatu.
Naome ane chimiro chakazara chechisikigo.
Iye zvinoshamisa kuti anovenga kushanda kunze asi anoramba akagwinya nekumisikidza nzira yaanodya uye nekungoita 30 maminetsi e cardio katatu pasvondo.
Nezve izvo zvekuvaraidza, Naome anoda kuimba nekutamba. Iye zvakare anofarira munhabvu nemitambo yebhasikiti.
Utatu Fatu- Naome Mararamiro:
Naome anofungidzirwa Networth yemadhora zana nemakumi masere nezvishanu asi haararame pazasi penzira yake. Kutenda rudo rwakadururwa paari nemurume wake Jimmy Uso, Varoorani vanogara vachifara kumba kwavo kuPensacola muFlorida nevana vavo Jayla naJaciyah Fatu.
Taura nezvekufamba kwake, zvinenge zvisingaiti kuti Naomi ave nemotokari yakawanda kunyange zvazvo akangotarisa achityaira munhu akaderera anotaura zvakanaka pamusoro pake.
Naome anopa Natalya uye nhepfenyuro yemitambo - Renee Young kukwira mumotokari yake yepasi.
Utatu Fatu- Naome Chokwadi:
Naome ndiye mukadzi wekutanga muAfrica -America kuhwina iyo SmackDown Yevakadzi Championship Chinyorwa. Iye zvakare anoratidzira simba rakakura rehunhu nekubata nevateveri vechisarura nenzira yakanakisa yaanogona.
Naome Fatu anobata nerusaruraganda nenzira yaanogona napo.
Iye anoonekwa pane yeAmerican chaiyo terevhizheni akateedzana Total Divas uye akamboonekwa pane yeAmerican comedy clip show Kunyengera.
Naomi akaitawo basa re "Murphy" mune yekuita bhaisikopo The Marine 5: Hondo yehondo (2017).
Naome Fatu muchivharo chemufirimu: Iyo Marine 5 Hondo Yenhandare (2017).
Naome akaburitsa rwiyo rwake rwekutanga rwakanzi "Kutamba Husiku Hwose" Muna Chivabvu 2014. Vhidhiyo yemumhanzi yaiuya (yakawanikwa pazasi) yakaburitswa nguva pfupi yapfuura pane WWE yeYouTube chiteshi.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Utatu Fatu (Naomi) Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!
unoratidzika sehama dzangu mwanasikanafirend uye iwe unodakadza